Iifowuni ezintathu zeRedmi ziphelelwe luhlaziyo lwePie ye-Android | I-Androidsis
UXiaomi uqinisekisa iRedmi entsha engazukufumana uhlaziyo kwiPie yePie
Inxalenye enkulu yeemveliso ngoku zihlaziya iifowuni zazo kwi-Android Pie. Nangona ikwalixesha lokuba kubhengezwe ukuba kukho iifowuni ezingazukufikelela ekugqibeleni. Le yimeko yeXiaomi, ebhengeze amagama e ezinye iifowuni ezingayi kuhlaziya. Uphawu lwaseTshayina lusishiya sinamagama amathathu, onke avela kuluhlu lweRedmi.
Sisibhengezo esisemthethweni sophawu lwaseTshayina, kwiwebhusayithi esemthethweni. Kuyo, iXiaomi iqinisekisa amagama eefowuni ezintathu ngaphakathi kuluhlu lweRedmi baya kushiywa ngaphandle kokufikelela kwi-Android Pie. Iindaba ezimbi kubasebenzisi abanayo nayiphi na le modeli.
Kule meko ikwa malunga nee-smartphones ezintathu ngaphakathi kuluhlu lweRedmi zaziswa ngokusesikweni kunyaka ophelileyo. Ke sisigqibo esinokuthi ngokuqinisekileyo sivelise impikiswano phakathi kwabasebenzisi bayo nayiphi na le modeli yeXiaomi. Kodwa baphelelwa yiPie ye-Android.
Abo bakhethwe luphawu lwaseTshayina kule meko ibingabo Redmi 6, Redmi 6A kunye noRedmi S2 (ekwabizwa ngokuba yiRedmi Y2). Akukho namnye kwezi modeli uya kuba nakho ukufikelela kuhlaziyo. Ngelixa ezimbini zokuqala zizinto ezinokuthi ziqondwe, kuba zikuluhlu lwazo olusezantsi, eyesithathu inempikiswano yokuba bangayiqalisi.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iindaba ezimbi kubo, abaya kuba bengafikeleli kwi-Android Pie kwiifowuni zabo. Ekuqaleni, uXiaomi wayenezicwangciso zokuba ezi fowuni unokufikelela kuhlaziyo kamva kulo nyaka, kodwa kubekho utshintsho lwezicwangciso. Ke bonke kufuneka bahlale kwi-Android 8.1 Oreo.
Nangona inkampani iqinisekisa ukuba baya kuyenza qhubeka ukhupha uhlaziyo lwe-MIUI kwezi fowuni, ngoko abaphelanga nkxaso Njengabanye uphawu. Kodwa abayi kuba nakho ukufikelela kwi-Android Pie nangaliphi na ixesha. Ucinga ntoni ngesi sigqibo sikaXiaomi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » UXiaomi uqinisekisa iRedmi entsha engazukufumana uhlaziyo kwiPie yePie
I-Instagram ingasusa ukuthanda kwiifoto